Iyo Brexit nyaya inogara yakagara yakarongerwa chirongwa: Martin Vrijland
Iyo Brexit nyaya inogara yakave chirongwa chakatemerwa. Ivo vanga vachitevera saiti iyi kwenguva, vakaverengera kudzokorora, asi ngatizvipfupise. Kana iwe ukaona kuti wega wezvematongerwo enyika anongori mutambi anoshanda akakosha kwehurongwa hwekudyidzana kwenyika dzese uye anoshanda pachivande kune aristocracy, ipapo uchaona kuti nyaya yeBrexit inoshandawo chirongwa chekudyidzana kwepasi rose. Zvakanaka ungati:Ehe, asi Brexit ndeye anti-EU uye nekudaro ichipesana nekuwedzera masimba masimba". Ndiwo iwo zano uyo wakakurudzirwa nevezvematongerwo enyika uye vezvenhau. Iyo Brexit yaigara yakagadzirirwa kupera mukutadza.
Kungori kuita kweBritish imba yepazasi, kuburikidza naTheresa May kutarisana naJeremy Corbyn uye nhaurwa yese nezve yakanaka kana yakaipa chibvumirano chinofanira kupa fungidziro yekuti tiri kubata nechokwadi chezvematongerwo enyika. Theresa May akatadza kuwana mvumo pachibvumirano ichi uye akaita nzira kuna hardliner Boris Johnson uye zvave kuitika zvisingaite zvachose, naJohnson achiedza kumanikidza bato risingabvumirane Brexit neparamende yeBritain kuyedza kurwisa izvi zvakare (ona mapundu mafambiro muBritish House of Commons of nezuro). Iwe haufungi kuti zvinonakidza here? Iwe unopupurira kuitirwa kwevatambi vepamusoro; zvakare inonzi "vezvematongerwo enyika".
Ndakagara ndichidana kuti: Brexit inofanira kuratidza iyo yeEurope kuti kana iwe uchida kusiya EU, iwe unoinzwa iyo muhomwe yako. Kutanga, zvisinei, kuvaka nekuchenjera kwakagadzirwa kuti kusemesa iyo anti-EU kuyerera. Muchokwadi, isu tinoona pasi rese kuti imwe uye yakafanana mhando yakavakwa nehungwaru: iyo 'kurudyi' rudzi. Izvo zvakatanga naNigel Farage nechikwata chake muEU, avo vakashora uye vachishora zvikuru iyo isinemocracy administrative administrative. MuUS ndiDonald Trump anomiririra chiratidzo kurudyi uye muBrazil ndimo Jair Bolsonaro. Mune dzimwe nyika dzeEU tinoona mazita akadai saMarine Le Pen, Thierry Baudet uye unogona kupedzisa runyorwa. Iyi 'kurudyi' brand inonamatira kune mamwe mazano ane maitiro akafanana. Nguva zhinji ivo vari vekunyika, vanoshoropodza nhoroondo dzechinyakare (dzinogona kushumwa se "zano rekurangana") uye vanoshingairira kuchengetedzwa kwakasimba kwehupfumi hwavo pachavo. Kubva pane izvi unogona kuziva kuti isu tiri kubata nematinji emagetsi akafanana, kunyange uchigona kurira zvinopesana. Ini ndichatsanangura.
Chikonzero chekuti 'kodzero' iyi chivakwa chakavakwa zvakanyatsonaka ndechekuti vatongi vekumusoro kweropa (ivo varatidziri ava vatambi vari kuwedzera kuita kwavo kwezvematongerwo enyika kukuita kuti utende kuti democracy iriko zvechokwadi) ziva kuti kune huru iripo mafungiro pakati pehuwandu hwepasi rose, anopesana nehurongwa hwekudyidzana kwenyika dzepasi rose. Chii chaungaite zvirinani kupfuura kuwedzera hukuru kurudziro iyi kurudyi kuburikidza neyemazhinji maficha kutarisisa uye kuita zvematongerwo enyika zvikuru mukufarira, wozovaita vane mhosva yekudonha kwehupfumi; ichiteverwa nekusagadzikana kukuru munharaunda? Kana iwe ukaunza hafu yepasi rese mukati mechikepe chebhuroka reruboshwe-uye wobva waona kuti izvo zvikepe zvinogona kuve nemhosva yekusagadzikana uye kupunzika, unogona kudhiza iro ruoko-rwoko rwendo ngarava nevanhu vese vari mungarava se vane mhosva.
Mabhomba ari muzasi kwengarava dzeboka rerudyi-mapapiro zvino zvave kuitwa zvakada kufanana. Webhusaiti alt-market.com inotsanangudza zvakazara maitirwo ehurongwa hwepasi rose kuronga kudonha kwehupfumi muUS pasi paTrump. Ini ndinotora chinzvimbo chekuti tinoona chimwe chinhu chakafanana muUK nemuchereched kurudyi. Kunyangwe kana Brexit isina-kubatika kana kumisikidza Brexit kuburikidza necherozvematongerwo enyika-yehondo kana sarudzo nyowani dzichaitwa: zvese zvakatemerwa kuputsa hupfumi hweBritain uye kudhiridzira dzimwe nyika dzeEurope.
With the kudzora kuparadzwa kubva kumhando kurudyi iwe wakawana kukunda kukuru kweiyo globalisheni ajenda mune imwe yakawira pasi swoop. Vanhu vese vanonyura vengarava yerudyi-yemapapiro vanozopepetwa nevamwe vanhu vese vobva vaiswa pamusoro nekuzungunuka neminhenga. Shure kwaizvozvo vanofungidzira kuti vangasungwa vakakwira chikepe chekare-kare chakavimbika chikepe icho chichaenderera mberi munzira kuenda mukudyidzana kwenyika dzepasi rose uye kusimba kwesimba. Ivo vanonyudza ivo zvirokwazvo vachashambidzwa pasi peiyo yakanyanya kudzvinyirira sprayer. Iro boka rinonetsa iro, kana zvichidikanwa, raida kuti zvisiyane rinobva ranyarara chose. Isu tiri parwendo rwenguva dzakarongwa muUS neEurope (semhedzisiro yehurongwa hweBrexit hwakanangana nekupedzisira munhaurwa). Bhavha bhandi rako pachigaro, Dorothy! Verenga pano the sequel)
Kuderedzwa kuraswa kweiyo brand 'rechts', Trump, Brexit (nezvose zvakabatana nazvo) zvatanga
Uri Ursula von der Leyen (ramangwana re EU mutungamiri) chaiye wegazi rimwe chete semhuri yeumambo weBritish?
Tags: Boris Johnson, Brexit, dhiri, debacle, Featured, Jeremy Corbyn, Imba yepasi Britain, no deal, paramende
Uye kupedzisa nyaya, iro bapiro rerudyi rinobatana neyekuda kupfura (kusanganisira kuuraya rudzi muSerbia) kwatinoona munhau senhau dzenhema (psyops) mumakore achangopfuura. Nezvo, iyo 'yerudyi-bapiro' chiratidzo chinoratidzirwa seyakawedzera dema. Iyi nzira unovaita vakawedzera njodzi uye vanopenga.
Iwe uri 100% chaipo!
Ini ndoziva zvechokwadi kuti ihuru hombe. Idzi dzese idzi nziyo dzinoitwa basa idzo dzavachazadzisa kusvika kumagumo, pakurwadziwa kwe ... Asi pane chimwe chinhu chikuru chiri kuitika: Iyo Zio Nazi Cabal iri kufa mushure mekufa uye chinotevera chinotevera chakamirira!
ndine urombo ...
Chakapinza chinyorwa zvakare, ndatenda.
Inogona kunge iri nyaya yakanaka kune yeFakisheni yeSosaiti: -) - uye hunhu hwesaenzi kuUVA.
Kana mapurofesa achiri kuzivisa democracy, ngatifungei
Boris Johnson wedzinza remhuri yevaTurkey (Ottoman) elitist anogona kutanga mhirizhonga muEurope; mhirizhonga kubva paizotorerwa Humambo hweOttoman:
Kubva ku Wikipedia, the encyclopedia free
Svetukira kune yekufamba Yeuka kutsvaga
Mune iri Ottoman zita reTurkey zita, Ali Kemal ndiro rakapihwa zita, uye hapana zita remhuri.
4 Kurume 1919 - 20 June 1919
Mutungamiri Damat Ferid Pasha
Inodzidziswa naMehmed Ali Bey
Kubudirira kwaHacı Adil Arda
Istanbul, Umambo hweOttoman
Akafa 6 Mbudzi 1922 (ane makore 54 - 55)
İzmit, Umambo hweOttoman (Turkey yemazuva ano)
Muroora (s) Winifred Brun
Vana 3, kusanganisira Zeki Kuneralp
Voukama Stanley Johnson (muzukuru), Boris Johnson (muzukuru)
Basa Gurukota rinoshanda (vashandi vebasa), mutori venhau, mudetembi
Ali Kemal Bey (Ottoman Turkish: ols_XXUMX - 1867 Mbudzi 6) aive mutori-akazvarwa weTurkey   mutori wenhau, mupepeti wepepanhau  uye wezvematongerwo enyika akasununguka siginecha, anga ari wevamwe mwedzi mitatu Gurukota reMukati mune hurumende yaDamat Ferid Pasha, iyo Grand Vizier yeHurumende yeOttoman. Akaurayiwa panguva yeHondo yeTurkey yeRusununguko.
Kemal ndiye baba vaZeki Kuneralp, aimbova mumiriri weTurkey muSwitzerland, United Kingdom, neSpain. Uyezve, ndiye sekuru vababa veese ari mumiriri weTurkey Selim Kuneralp, uye wezvematongerwo enyika weBritain, Stanley Johnson. Kuburikidza naStanley Johnson, Ali Kemal ndiye sekuru-sekuru weMutungamiri weBritish Boris Johnson, pamwe naJo Johnson (MP weOrpington), mutori venhau, Robert Johnson, uye muzvinabhizimusi Leo Johnson.
Uhwu ndohumwe humbowo hwekuti uyu munyowani uchatongwa kusvika kune yekupedzisira nesamu hombe satanic inbred mhuri ine sekuru-sekuru Jehovah! Iwe unoziva kuti mutorwa chikara anonziwo mwari akadzokorora vanhu vekutanga mumufananidzo wake ...
Kuruboshwe kana kurudyi akanyora kuti:
Izvo hazvina kuoma:
Chikuru Israeri uye zvakare iyo Yakazara Nyika?!
Iyo New World Order?!
Humambo Hutsva hweOttoman?!
Kurasikirwa kweEurope. ?!
Kuparara kweZio Nazi USA
Yechitatu Hondo Yenyika?!
Ndege yakakura yakaipa inovhiringidza satanic mutambo kana zvakasiyana?
Zvese zvirikuenda maererano nehurongwa ...
"Ndine chokwadi kuti euro ichatimanikidza kuti tisvitse chirongwa chitsva chehurongwa hwehupfumi. Hazvibvumike nezvematongerwo enyika kufunga izvozvo izvozvi. "Asi rimwe zuva pachava nedambudziko uye zviridzwa zvitsva zvichagadzirwa."
- Romano Prodi, Zvita 2001
« Iwewe wakapusa sewe?
Boris Johnson (madzitateguru aOttoman) anogona kutanga nyonganiso muEurope iyo ichasimudza Humambo hweOttoman? »
Total Visits: 12.231.813